Ividiyo converters Free ye-Android Phones
I-Android yokusebenza ngu ngokukhawuleza wokuba elikhulu rival emva yayo ukukhutshwa. Samsung Ericsson, LG, Huwei, Nexus nezinye iselula iinkampani ingaba esiza ngaphandle okokoko omabonakude equipped nge-Android OS. Oku mobile yokusebenza sele eyakhe share ka-disadvantages kwaye omnye kubo ukungakwazi ukuhlanganisa inkxaso bonke ividiyo iifomati. Kunjalo uyakwazi ukuyisebenzisa ukuba akunyanzelekanga ukuba ndiyinqaye. amaxwebhu, clips, fumana iividiyo, kwaye kwento yonke kodwa indlela uphumelele khange ukwamkela bonke iifomati. I-videos ingaba incompatible kufuneka niguquke kuqala ukuze uqinisekise ukuba ifayile ifomati kuxhaswa ngamandla icebo. Ukwenza oku, kuya kufuneka i-ividiyo isiguquli ye-Android reliable, ngokukhawuleza kwaye iyanelisa. Ukuze kuphunyezwe umsebenzi, sisebenzisa presenting ngaba eyona free apps kakhulu kakuhle-ezaziwayo kwiindawo zentengiso. Kunye ngaphezu yezigidi installations, Ividiyo Guqula Android sesinye izinto eziluncedo ukuba ibe uninzi isebenziseke ukuba ungakwazi zange ukhuphele ngayo ukuba ngaba uthando ukuze bonwabele videos ahluka-hlukeneyo zokusebenza.
iinkwenkwezi yi-uninzi abasebenzisi, esi sicelo ingaba, eneneni, ukuba k.
Ukongeza, luxhasa kunoko ze-Android kokuthile
Kwaye ngaphezulu. Le app ividiyo isiguquli Android unako aqonde phantse zonke ividiyo iifomati ezifana WEBM, WMV, MPG, FLV, AVI, DIVX, MOV, kwaye ngaphezulu. Sebenzisa i-app Ividiyo Guqula Android ukuba ufuna ukuguqula a ividiyo komnye ifomati, khupha ilizwi kwi-vidiyo kwaye ukucutha ividiyo isayizi yefayili. Kwaye kanjalo ikuvumela ukuba guqula iifayile preserving yoqobo umgangatho kwaye adjusting ividiyo izicwangciso ngokunxulumene neminqweno yakho. Yenzelwe yi-Acroa Eendaba Studio, Chitha, Nokuguquka ukuba ikho a polished ujongano kwaye ucocekile apho lenza a emangalisayo isicelo. Kulula kakhulu ukusebenzisa kwaye ixhasa ezahlukeneyo ividiyo iifomati umzekelo, oyi-MP, FLV, MOV, MKV, AVI, WMV, RMVB, njalo-njalo, iyakuvumela ukuba guqula videos ethandwa kakhulu iifomati, khupha ilizwi ukusuka videos, hlela videos, kwaye ixhasa uphumezo indlela imisebenzi khetha umbala ukongeza kuyo lixhotyiswe a convenient iqhosha kuba ekude cofa kwindawo enye. Free, eli kwemichiza ividiyo isiguquli ye-Android mobile kuxhaswa ngamandla izibhengezo. Oko deserves kuba oku kubandakanya kwindlela yakho gadget. Oko luthathe iifama ifayile ubungakanani decent. MB kwaye ithelekiswa nge-Android phones usebenzisa uhlobo.
Ividiyo Guqula free ingaba isicelo ukuba babe kakuhle kakhulu ukwenza a uguqulo ezisisiseko ividiyo. Nje na abanye, unako kanjalo khupha ilizwi njengoko oyi-MP, ukunika izicatshulwa ka-imiboniso kwaye khupha i-ividiyo isakhelo-yi-isakhelo. Kwaye luxhasa ethandwa kakhulu iifomati njenge GP, oyi-MP, FLV, AVI, MOV, ZOMELELE kwaye RMVB. Esi sicelo free ividiyo uguqulo ye-Android ngu assessed. inkwenkwezi kwaye kubalulekile ngokupheleleyo ithelekiswa nge-Android mobile phones usebenzisa uhlobo.
Oku zingangahambelani eyona ividiyo isiguquli ye-Android ngenxa yokuba inikezela tshintsha ifayile kakhulu ezisisiseko, kodwa nonetheless, novice abasebenzisi babe nokufumana yayo ujongano kulula ukuyisebenzisa okulungileyo ngokwaneleyo kuba imisebenzi eqhelekileyo. Ukuba uyayijonga inani labantu abathe ezifakwe kwindlela yabo icebo layo. Amaziko basenokuba a disappointment, kodwa esi sicelo ingaba ikhona kuphela ukususela kakhulu kutshanje kwi-Google Ukudlala. Ngokunxulumene ababhekisi phambili, esi sixhobo unako kunye ukhuphele kwaye guqula iividiyo kwi-ezahlukeneyo iifomati. Okwangoku luxhasa a libanzi ngezixhobo ezahlukeneyo iifomati kuquka XVID, VOB, i-DVD, MPG, GP, FLV, MOV, DIVX kwaye abaninzi ezinye. Kule vidiyo isiguquli ye-Android free lunika ingxelo ujongano ukuba glplanet imbonakalo. I-yelenqe mfusa kwaye greynetic lenza eyodwa kuthelekiswa nezinye. Amaqhosha ingaba libanzi ngokwaneleyo ukuyixhasa yayo, sebenzisa ngu iselwa elula. Kule vidiyo isiguquli ye-Android ugqibelele kuba phones usebenzisa lokuqala ze-Android. Ngokungafaniyo abanye apho imfuneko yi high ngokwaneleyo ngenxa yokusebenza, i-app unako sebenzisa kwi-Android inguqulelo.
Ngokufanayo, kubaluleke kakhulu ukukhanya kunye K apho lenza olugqibeleleyo kuba gadgets kunye limited wolwazi kwaye iyaqhubekeka amandla. Ziyaziwa kuba yayo iyanelisa uguqulelo lwencwadi-MPEG ividiyo kwi-MP. Ukuba bucala, le software akanalo imisebenzi grand okanye bale mihla imisebenzi ka-ukuhlela ividiyo. Njengoko olu setyenziso lijolise guqula ezisisiseko iifayile, uyakwazi ukusebenzisa esi sixhobo ukuba unayo i-old smartphone okanye tablet kunye specs ngenye madala. Ukuba yakho iselula akaxhasi ividiyo ifomati ukuba ufuna ukufunda, ungasoloko sebenzisa omnye ividiyo converters ye-Android wacebisa ngasentla ukuyenza ithelekiswa. Njengoko uza isaziso, uninzi izinto eziluncedo elicetyiswayo kule ngeposi, ukuba asingabo bonke, kuba imisebenzi eyongezelelweyo ukongeza uguqulelo ezisisiseko ividiyo ifayile. Kwakhona, ezinye ii-apps ziqulathe izibhengezo ngelixa abanye ingaba ngokupheleleyo ngaphandle. Lento ngokugqibeleleyo understandable onikiweyo yokuba ezi izicelo ingaba freeware. Kuxhomekeke iimfuno zakho, iinketho zakho ingaba unlimited xa kufuneka nilinde a ividiyo ukuba ayixhaswanga yi-Android
← France lencoko incoko
Ndinqwenela ukuba ahlangane mature abafazi i-abidjan. Uncedo Afrika →